Jakoba 2 - Ny Baiboly
Jakoba toko 2
Ny tsy fizahan-tavan'olona - Ny finoana tsy misy asa tsy mahavonjy.
1Ry rahalahy, aza asiana fizahan-tavan'olona ny finoana an'i Jesoa-Kristy Tompontsika be voninahitra. 2Raha, ohatra, ka misy olona miditra amin'ny fivorianareo: ny iray miperatra volamena sy mitafy saro-bidy, ary ny iray kosa mahantra ratsy fitafiana, 3ka ilay mitafy saro-bidy no jerenareo sy ataonareo hoe: Mipetraha hianao eto amin'ny toerana aloha; fa ilay mahantra kosa ilazanareo hoe: Mitsangàna erý, na mipetraha eto amin'ny fitoeran-tongotro; 4moa tsy miangatra va hianareo amin'izany, sy tonga mpitsara ratsy hevitra loatra?
5Henoy ange, ry rahalahy malalako: Moa tsy ny mahantra eo imason'izao tontolo izao va no nofidin'Andriamanitra ho mpanan-karena amin'ny finoana, sy ho mpandova ny fanjakana nampanantenainy an'izay tia azy? 6Ary hianareo kosa ka ny mahantra indray no alanareo baràka! Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo, sy mitarika anareo ho any amin'ny fitsarana? 7Ary moa tsy izy ireny ihany koa va no miteny ratsy ny anarana tsara iantsoana anareo? 8Raha hianareo mitandrina ny didy ambony indrindra voalazan'ny Soratra Masina hoe: Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara hianareo; 9fa raha mizaha tavan'olona kosa hianareo, dia manota, ka helohin'ny Lalàna ho mpanota. 10Fa na zovy na zovy nitandrina ny Lalàna manontolo, nefa diso amin'ny anankiray monja, dia meloka amin'izy rehetra. 11Satria ilay nanao hoe: Aza mijangajanga ihany no nanao hoe: Aza mamono olona koa. Ka na tsy mijangajanga aza hianao, nefa mamono olona, dia mpandika lalàna ihany. 12Mitenena sy manaova toy ny olona hotsarain'ny lalàn'ny fahafahana. 13Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjaran'izay tsy mamindra fo; ary ny famindram-po no maharesy ny fitsarana.
14Raha misy olona milaza azy ho manam-pinoana, nefa tsy manana asa, inona no soa ho azony? Moa hahavonjy azy va izany finoana izany? 15Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sy tsy manan-kohanina isan'andro, 16ka ilazan'ny iray aminareo hoe: Mandehana amim-piadanana, mamindroa sy mivokisa, nefa tsy omeny izay ilain'ny vatany, inona no soa azony amin'izany? 17Mba toy izany ihany koa ny finoana, raha tsy omban'asa izy, dia tena maty mihitsy. 18Hamaly koa ny olona hanao hoe: Hianao manam-pinoana, hono, ary izaho manana asa koa. Asehoy ahy hoe ny finoanao tsy misy asa, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. 19Hianao mino fa misy Andriamanitra iray; tsara ny ataonao; ny demony koa anefa mino izany, ka mangovitra.
20Fa moa te-hiaiky va hianao, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy omban'asa? 21Moa tsy ny asa va no nanamarinana an'i Abrahama razantsika, tamin'izy nanolotra an' Isaaka zanany teo ambonin'ny otely? 22Hitanao fa niara-nanao ny finoana sy ny asany; ary ny asa aza no nahatontosa ny finoany. 23Dia tanteraka ny Soratra Masina hoe: Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka notanana ho fahamarinany izany, sady nantsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. 24Hitanao amin'izany fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana fotsiny ihany. 25Toy izany koa Rahaba, vehivavy janga; moa tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy, dia tamin'ny nandraisany an'ireo irak'i Josoe, sy nampandehanany azy tamin'ny làlan-kafa? 26Toy ny ahafatesan'ny vatana tsy misy fanahy no ahafatesan'ny finoana tsy omban'asa koa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1112 seconds